”Waxaa gobol hebel ku soo ”duushey” DF” – Tibix siyaasadeed oo Somalia oo qura ka jirta! (Ka faa’iidayso) | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Waxaa gobol hebel ku soo ”duushey” DF” – Tibix siyaasadeed oo Somalia...
”Waxaa gobol hebel ku soo ”duushey” DF” – Tibix siyaasadeed oo Somalia oo qura ka jirta! (Ka faa’iidayso)
(Hadalsame) 15 Feb 2020 – Waxaan in badan oo ka mid ah warbaahinta iyo qaar ka mid ah wariyayaasha Soomaalida maalmahaan ka maqlayay erayo ay ka mid yihiin “Ciidamada dowladda oo ku duulay gobal hebal ama degmo hebla”. Marka aan maqlay erayadaan waxaa niyadayda kusoo dhacay oo aan is waydiiyay su,aalahaan hoose:
Yaa duulay, yaase lagu duulay?
Dalalka maanta dagaaladu daashadeen waxaa ka mid ah wadanka Afghanistan oo dowladdu ka taliso wax ka yar 30% hadana waxaan ognahay in wadankaas ka mid yahay wadamada ugu xuduudaha adag marka la fiiriyo wadamada dhaca koofurta Aasiya. Waan tabaryarahay micnaheedu maahan xuduudayda ma ilaalsan karo ama ma tagi karo, waxaana in ciidan qaran tagaan xuduudaha dalka tahay ficil wanaagsan waa haddii loo fiiriyo dhanka aragtida fiyow.
Ku dhaqanka iyo fahamka federalku waa in dowladda dhexe iyo dhowlad-gobaleedyadu ogaadaan in qolo walba leedahay waajibaad gaar ah oo saaran iyo inay jiraan waxyaabo ka dhexeeya oo u baahan wada-tashi iyo wada-xaajood. Haddii arrinta laga hadlayo ay tahay mid qusaysa ilaalinta xuduudaha dalka waa in maamul-gobaleedku fahmaan in arrintaan ay tahay waajib saaran dowladda dhexe sidoo kalana ay ka gacan siiyaan sidii ammaanka xuduudaas loo sugi lahaa, balse haddii laba ciidan oo midna yahay kii qaranka midna yahay kii maamul-gobaleedka ay dhufays isugu jiraan taasi waxay calaamad u tahay faham la’aanta nidaamka federalka wayna adkaan doontaa in hormar la gaaro ilaa laga fahmayo laguna dhaqmayo waxa aan haysano oo ah nidaamka federalka.
Way imaankartaa kala aragti duwanaan u dhaxaysa maamul-gobaleedyada iyo dowladda dhexe, balse taas waxaa xal looga gaari karaa in qolo walba aqoonsato kuna dhaqanto waxa uu u ogaalnayo dastuurka dalku. Dad badan ayaa maanta qaba in halaagga iyo hormar la,aanta na hortaagan ay tahay federalka halka kuwa kale ay qabaan in hannaankan uu yahay mid aan ku gaari karno hormar waara.
Waxaa hormar lagu gaari karaa kala danbaynta iyo garashada qolo walba ay garato waxa dastuurku u ogalaanayo iyo waxa uu ka reebayo. Waxaa muhiim ah in dadka shacabku ay muujiyaan dareenkooda maadaama aysan jirin maamul ama dowlad dhisnaan karta ilaa ay haysto kalsoonida dadka deegaanka. Sidoo kale kabashada dalkeenna waxaa qayb wayn ka qaadan kara saxaafadda, waxaana kula talin lahaa madaxda warbaahinta iyo wariyayaasha inay ogaadaan in hadalkoodu meel dheer gaarayo sidaas dartedna ay isku dayaan inay soo tabiyaan wax u wanaagsan dalka iyo dadka oo aan keenayn colaad iyo kala fogaansho.
Previous articleManchester City oo loo dhaadhicin karo Heerka 4-aad ee ciyaaraha Ingiriiska (Arag xeerkan)
Next articleSomalia oo looga digey halista ku hoos qarsan siyaasadda Maraykanku ku wajahayo dalkeenna!
(Hadalsame) 29 Sebt 2020 - Dalka Somalia waa dal dayacan oo waloow uu 60 sano jir maanta yahay aan weli lahayn wax siyaasad ah...